Butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela ubudlelwane emkhayeni akulula ukuqonda, akumangazi ukuthi ngezinye izikhathi abantu abasiqondi kahle nencazelo 'half-brother "," nengxenye-udade ", wayephambanisa nabo nengxenye-mfowethu nangokuthi dadewethu.
Izihlobo noma abasemzini
At inhliziyo izakhiwo kuyinto umshado phakathi kwendoda nowesifazane, okuholela ukuvela ubudlelwano of bobabili abashadile babe nezihlobo komunye nomunye, kanye nezihlobo kanye phakathi kwabashadile. Lobu budlelwano ngokuthi izakhiwo kanye ivalwe, njengoba umthetho, ne ukuqedwa umshado.
Ushade ngayinye abashadayo wangaphambili kuphakamisa omunye igagasi ubudlelwane eyinqaba. Sebeyazi kakade, futhi izingane ukuba ibuye emshadweni wayo wokuqala. Yingaleso sikhathi-ke, ukuze babonakale isigamu-abafowabo nodadewabo.
Ngakho yini "half-brother"? "Consolidated" sihloko posted kwisichazamazwi Ushakov. Ngokusho kwakhe, half-brother - kuyinto indodana usingababa noma nosingamama, nencazelo efanayo unikezwa, futhi le nkulumo ethi "ingxenye-udade". Isifingqo izingane - izingane kusukela odlule imishado, abesilisa nabesifazane, wajoyina nomunye emshadweni wesibili. Ababona bomdabu, kodwa "ulwazi" kuphela emkhayeni jikelele. Kungenjalo-ke kuyomelwe zithi isifinyezo abafowethu nodadewethu akudingeki abazali ezivamile, basuke zixhunywe ubudlelwano emndenini, kodwa hhayi nokuzwelana begazi.
Emndenini elalisanda kumiswa ingathola ingane ahlangene abashadayo, noma ngisho eziningana. Nezingane ukusuka imishado odlule ingane okungabonakala umzali ezivamile, laba bazalwane nodade abizwa ngokuthi hhayi ngokugcwele. Phakathi kwabo kukhona nokuhlukanisa: labo ubaba ezivamile, esibizwa isigamu-futhi labo abakwaziyo ukufunda umama ezivamile - lesizalo. Isigamu abafowethu nodade izihlobo igazi, zingabantu ngokomthetho amalungelo afana esigcwele igazi.
Ngo yokuphila kwengane, okuyinto kwakuyimina ngedwa ingane emkhayeni, singazelele kuyi stepsister noma stepbrother. Lokhu kakhulu sishintsha ukuphila kwakhe futhi kudinga ukushintsha imikhuba eminingi. Inkinga yokuqala iphathelene umkhawulo isikhala siqu. Umhlalaphansi manje kungenzeka kuphela uma umnyango ivaliwe ilokhi. Friction ezingavela ngenxa kokuya endlini yangasese uma umuntu kusukela ingane ichitha isikhathi esiningi. Manje akukho owawuzoba ngokuphelele ziphethwe omunye umuntu omunye izingane. Sine ukwabelana amathoyizi, i-computer kanye ngocingo. Phakathi nengxenye-izingane ngokuvamile umbango ngoba uthando lwabazali babo.
Ngokuvamile esebenza ngezindaba ahlabayo uhlelo ikhava into enhle ukuthi kwenza ingane isigamu-udadewenu noma half-brother. Lokhu, isibonelo, ithuba lokuba eduze nabantu abangeke ungadlala, okungukuthi ethakazelisa kakhulu kunaleyo umuntu ahlale yedwa ngaso sonke isikhathi. Homework futhi manje ihlukaniswe inqwaba amalungu omndeni. Futhi mingaki amathuba ukuxhumana! Uma isigamu-abafowabo noma odadewabo namanje yokuthola ulimi olulodwa, bakwazi ukuxoxa ubusuku bonke.
Siza isigamu-abafowabo nodadewabo ukuthola izinto esivumelana ngazo kufanele kube abazali. ukuziphatha kuphela elungile, ukubekezela awapheli, ikhono ukulindela ukuqeda izici ezingezinhle kuyosiza izingane ezisuka e ukuthukwa izingxabano ukuxhumana kanye imidlalo. Ngemva kwesikhathi, izingane elihlanganisiwe baqala ukuzwana kahle nomunye, ubudlelwano phakathi kwabo banobungane. Phela, lo ebuntwaneni Imininingwane ihlanganisa ngokushesha isigamu-bazalwane, abantu kunzima kakhulu ngabantu abadala ukuba nibe abangane abaseduze. Ngakho-ke half-brother - lokhu akukona isihlobo, umzala nomalokazana, kepha yena ube umngane okahle.